Cabbaas: Qeyb kama nihin wadahadallo uu Mareykanka hormuud ka yahay - BBC News Somali
Cabbaas: Qeyb kama nihin wadahadallo uu Mareykanka hormuud ka yahay
Hoggaamiyaha Falastiiniyiinta ayaa gaashaanka u daruuray ka qeybgalka wax wadahadalo ah oo uu la galo Israa'iil oo uu Maraykanka hormuud ka yahay . wuxuu go'aankan qaatay kadib markii Maraykanka uu magaalada Qudus u aqoonsaday in ay tahay caasimadda Israa'iil.
Wuxuu hadlayay kadib codkii aqlabiyadda ahaa ee golaha jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ee lagu cambaareeyay talaabada Maraykanka.
Maraykanka ayaa intii muddo bilo ahba waday qorista qorshe cusub oo wadahalado laga dhex bilaabo Israa'iil iyo Falastiiniyiinta.
Maxamuud Cabbaas ayaa sheegay in Maraykanka aanan wixii hadda ka dambeeya laga aqbali karin in uu noqdo dhexdhexaadiye daacad ah, isaga oo diiday in uu qeyb ka noqdo qorshaha Maraykanka ee uu hormuudka ka yahay wiilka uu sodogga u yahay madaxweynaha Maraykanka Jared Kushner.
"Maraykanka waxa uu caddeeyay in uu yahay dhexdhexaadiye aan daacad ahayn, mana aqbali doono wax wadahadalko uu hormuud ka yahay" ayuu yiri Cabbaas.
Dal Afrika ku yaalla oo taageeray go'aankii Trump ee Qudus
Carabta ma filayaan isbedel dhanka Israa'iil ah?